လူသားအားလုံးအတွက်: နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာလူတွေပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အရှုံးပေးရလိမ့်မည်
နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာလူတွေပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အရှုံးပေးရလိမ့်မည်
မာံသူ ရိန္ဒposted toU Naing Win
9 minutes ago near Rangoon, Yangon
နောက်ဆုံးတော့ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးဖြစ်လာပြီ
အမျိုးသားရေးမို့ အားပေးလိုက်ပါတယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် စစ်တွေမြို့ အတွင်း ရဲစခန်းရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တုန်းက၊ သေနတ်နဲ့ထုတယ်။ စစ်တွေ မြို့ကြီးကို ရိုဟင်ဂျာတွေက မီးဝင်တိုက်တာ ကြည့်ရုံပဲ တက်နိုင်တယ်။ ၉.၆.၁၂ နေ့က မောင်တောအရေး တည်ငြိမ်သွားပြီလို့ သမ္မတဝက်ဆိုက်မှာ လည်းရေးသားထားတယ်။ ၁၀.၆.၁၂ နေ့ခင်းမှာ စစ်တွေမြို့ဝင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ မီးရှို့တယ်။
၁၀.၆.၁၂့ နေ့ ည မှာ သမ္မတဝက်ဆိုက်မှ
(၁။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်မှ စတင်၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံး၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂) ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
သမ္မတကြီးကိုလည်း အားကိုးမိတယ်။ LNDက ရိုဟင်ဂျာဘင်ဂလီတွေကို တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါဘူးဟု ဆိုသည့် ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်သောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အပြစ်ပြောမိတယ်။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်သည့် အရေးကိစ္စကို အခြားပါတီဝင်တွေရဲ့ သဘောထားကိုလည်း ခုချိန်ထိ ဘာမှမသိရသေးပါဘူး၊ တကယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပါတီအားလုံးက အမျိုးသားရေးဖြစ်လို့ ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်သင့်ဘူးလား၊
၁၀.၆.၁၂့ နေ့ ည (၈)နာရီ အချိန် သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လူမျိုးတွေ သောင်းကြမ်းတယ်ဆိုတာကို ထည့်မပြောသွားတာလည်း စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဝက်ဆိုက်တစ်ခုမှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ် ဝန်ကြီးချုပ်ကို သမ္မတကြီးက ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံမယ်လို့ ဖတ်ရတာ အဲဒီသတင်း အမှန်တွေလား၊ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားအစစ်ဆိုတာ တကယ်ဖြစ်နေပြီလား။ ရဲချုပ် ခင်ရီကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ မပါဟုဆို၊ ကိုကိုကြီးကလည်း တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်းပြော။
ရခိုင်မလေး တစ်ယောက်အား၊ ရိုဟင်ဂျာ (၃)ယောက်မှ အဓမ္မ ပြုကျင့် လယ်လှီးပြီး သတ်ဖြတ်တုန်းတုန်းက၊ ရိုဟင်ဂျာတွေ နှုတ်ပိတ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ရိုဟင်ဂျာ (၁၀) ယောက် အသတ်ခံရတုန်းက ဆူးလေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်၊ ယနေ့ချိန်အထိ ရိုဟင်ဂျာများက ရခိုင်ရွာသူ ရွာသားများကို စာရင်းမရှိ ၊အင်းမရှိ၊ သတ်ဖြတ်၊ ရွာတွေကို မီးရှို့၊ စစ်တွေမြို့ကြီးကို မီးတိုက်ခဲ့ပေမယ့်၊ အခုချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ငြိမ်သက်နေပါတယ်။
စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးခင်းဖြစ်တုန်းက မြို့တော်ရန်ကုန်မှာ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ၊ ပြည်သူ၊ အပေါင်းကို သောင်းကြမ်းသူဟု စွပ်စွဲပြီး၊ ချေမှုန်းခြင်တိုင်း ချေမှုန်းခဲ့ပေမယ့်၊ အဲဒီကိစ္စကို သောင်းကြမ်းသူများနောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်နေတယ်၊ အခု ဆန္ဒပြ ရဟန်းတွေဟာ ရဟန်းအစစ်မဟုတ်ဘူး၊ သင်္ကန်းဝတ် ရဟန်းအတုများသာဖြစ်တယ်၊ စသည်ဖြင့် အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်ထိ တရားဝင် ပြန်ကြားဝန်ကြီးဌာနမှ မတောင်းပန်ပါဘူး။
အခုရိုဟင်ဂျာတွေဟာ စစ်တွေမြို့ကြီးကို မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင်၊ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးနေတာကို ” ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားသည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင
်ရေးအတွက် “ ဆိုပြီး ခပ်ရိုးရိုးလေး ရေးသားဖော်ပြမှု့ကို ဖတ်ရပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ (၁၀) ယောက် အသတ်ခံရတာကို အစိုးရ သတင်းစာများမှာ ရခိုင်မလေး အပေါ်မှာ (အဓမ္မပြုကျင့်သူ ကုလား၊ မွတ်စလင်လူမျိုး)ဟု ဖော်ပြတာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များက မကျေနပ်ကြပေ။ ထိုမကျေနပ်မှု့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆူးလေဘုရားအနီးမှာ အစ္စလာန်ဘာသာဝင်တို့သည်၊ ရိုဟင်ဂျာ ၁၀ယောက်ကို ရခိုင်လူမျိုးများမှ သတ်ဖြတ်သည့် ကိစ္စကိုလည်းကောင်း၊ သတင်းစာမှာ ကုလား၊ ကုလား၊ မွတ်စလင်လူမျိုးဟု သုံးနှုံးပြောဆိုမှု့ကိုလည်းကော
င်း၊ ဆန္ဒနှစ်ခု တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အစိုးရ သတင်းဌာနက ပြည်သူတွေကို ဘယ်တော့မှ တောင်းပန်းတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ထူးခြားသည်မှာ ထိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒနှစ်ခုကို အစိုးရသတင်းဌာနမှ လိုက်လျောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ဦး အသတ်ခံရတာ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူမည်။ ကုလား၊ မွတ်စလင်လူမျိုးဟု သုံးနှုံးတာကို ပြင်ပေးမယ်ဟု တရားဝင်တောင်းပန်တာတွေ့ရမှာဖြစ်
အချို့ကလဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ လွတ်တော်အတွင်းမှာ နေရာယူပြီး ဖြစ်နေသည်ဟု ဖတ်ရပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေရှ် ရေပိုင်နက်ကိစ္စကို မြန်မာ့အစိုးရ ပညာရှင်များမှ အနိုင်ရဟုဆို၊ ဘင်ဂလား အစိုးရမှလည်း သူတို့ အနိုင်ရဟုဆို၊ တရားသူကြီးများက မျှတသည်ဟုပြော၊ အစိုးရအဖွဲစည်းမှာ မပါတဲ့ ပညာရှင်တွေက မြန်မာ ရှုံးတယ်ဟု သတင်းဖတ်ရပါတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို အခြားသော ကရင်၊ ရှမ်းစတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ငြိမ်နေကြသည်။
၁၁.၆.၁၂ နေ့က ရိုဟင်ဂျာများကလည်း မောင်တောနယ်သည် သူတို့နယ်မြေဖြစ်တယ်၊ နယ်မြေရဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းမှာ……..ဆိုပြီးမရှင်
းမလင်းကြည့်ခဲ့ရ၊ တစ်ချိန်က အစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် လူထုကို ဓားမိုးပြီး ပြောခဲ့တဲ့ မိန်းခွန်းတွေ ရုပ်သံဖိုင်တွေကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားရာတွေဖြစ်လာတယ်။
နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ဖြစ်စဉ်တွေက အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတယ်…
စစ်သားတွေက သေနတ်ပါတယ် သူတို့က ဒုတ်ဓားပဲရှိတယ်။
အဲဒါ မကြောက်ဘူး၊ စစ်တပ် လုံးထိန်းရှေ့မှာ တရားဝင်ကို မီးရှို့တာ၊ အရင်က ရွာအဆင့်ပဲ မီးရှို့တာ၊
အခု စစ်တပ် ရောက်လာမှ စစ်တွေမြို့တောင် မီးရှို့ပြလိုက်သေးတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်တယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှကို မကြောက်တာဗျ။
မကြောက်ရအောင် သူတို့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေသလဲ၊ အဲဒီလူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။
သူ့တို့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူတွေရှိနေသလဲဆိုတာ အစိုးရသိသလား……….. မသိဘူးလား။
အစိုးရ တပ်မတော်ကလည်း ဘာမှ မလုပ်ဘူး ငြိမ်နေတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်း ဒီအရေးကို ငြိမ်နေတယ်။
ပြည်ပရောက် အတိုက်ခံ အဖွဲစည်းတွေက လည်းဘာမှ မပြောပဲ၊ အစိုးရ လှည့်ကွက်ဆိုတာကို ဇောင်းပေးပြီးပြောနေတယ်။
ပြည်ပရောက် အတိုက်ခံ အများစုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ တစ်ချိန်က ဘယ်လို ပါတ်သတ်ခဲ့သလဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဖုန်းတွေနဲ့ပြောနေတာ သူတို့တွေကိုများ ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားနေတာလား။
ဒါမှမဟုတ် ၊ မီးတွေ စိတ်တိုင်းကျရှို့ ပြီးရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ရိုက်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ တွေ့ရတယ်။
”ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေ မောင်တောမှ အသတ်ခံရတယ်၊ မီးရှို့ခံရတယ်“ အဲဒါကြောင့်
အကူညီပေးကြပါဆိုပြီး ကမ္ဘာကို အကူညီတောင်းမှာလား။
ဒါမှမဟုတ် အစိုးရက တကယ် အပြတ်တိုက်မယ် ဆိုတာကို အစကထဲက သိနေလို့ မစားရတဲ့ အမဲကို သဲနဲ့ ပက်နေသလားပေ့ါဗျာ။
သူတို့ဖုန်းတွေကို ကြားဖြတ် နားထောင်ဖို့ကလဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ တစ်ဖက်နိုင်ငံက ဖြစ်နေပြန်တယ်။
အခြားသော နိုင်ငံတွေမှာလဲ ”ရခိုင်လူမျိုးတွေက“ သူတို့ကို သတ်ဖြတ်နေပါတယ်ဟု ပြောပြန်နေတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအချို့ အသေခံပြီး အိမ်တွေကို ဖျက်နေကြတယ်၊ ပြီးရင် မှတ်တမ်းယူပြီး သတင်းယူနေတယ်။ စင်ကာပူမှာ ပြနေတဲ့ တီဗွီလိုင်းတွေမှာပါ..
ဆိုတော့ အားလုံးက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြန်တယ်…
ကိုယ်ပိုင် ဂြိုလ်တုတွေများ ရှိနေတာလား..
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်ဖို့လိုနေပါပြီ.. ဘယ်လိုလိုက်ပိတ်မလဲတော့မစဉ်းစား
နောက်ဆုံးတော့ ဒီလိုပဲ စဉ်းစားမိတယ်.
၁။ ။လူဆယ်ယောက်လောက်ကိုဖမ်းပြီး ဒီလူတွေဟာ ဆူပူအုန်းမှု့ကို ဖန်တီးသူတွေဆိုပြီး ဖမ်းပြမယ်၊
၂။ ။ပြီးရင် ဥပဒေအရ အရေးယူမယ်ဆိုပြီး အရေးယူပြမယ်။
၃။ ။အခု ဒဏ်ရာရာသူတွေကို အစိုးရက အကူညီပေးမယ်။
၄။ ။ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် ဝမ်းနည်းမိကြောင်း၊ စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောမယ်။
၅။ ။ပျက်စီးသွားတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေကို လူသားချင်းစာနာသောအားဖြင့် ဆောက်ပေးမယ်။
၆။ ။စစ်တပ် ဝင်ထိန်းလို့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းသားပြီဆိုပြီး၊ နောက် တစ်ရက်နှစ်ရက် ဒါမှ မဟုတ် တစ်ပါတ်အတွင်းမှာ တည်ငြိမ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်မယ်။
၇။ ။ပြီးရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေက မကြေနပ်လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပြဿနာထပ်ဖြစ်မယ်။
၈။ ။ရိုဟင်ဂျာတွေက မကျေနပ်လို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ ပြန်ချမယ်။
၉။ ။မောင်တောနယ်ကို ရယူဖို့ အာရက်ကမ္ဘာက ထောက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာပြောတယ်။
၁၀။ ။နောက်ဆုံးတော့ ရိုဟင်ဂျာကို မောင်တောနယ်က ထွက်သွားအောင် အစိုးရက မလုပ်ပေးနိုင်ဟု ယုံကြည်မိသည်။
၁၂။ ။ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေက အနိုင်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်။
၁၃။ ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တရားဝင် ဖြစ်ဖို့များနေတယ်။
၁၄။ ။ဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်းတွ တနေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာမည်။
၁၅။ ။ ။နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာလူတွေပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အရှုံးပေးရလိမ့်မည်။
၁၆။ ။ဒီပြဿနာဟာ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ အမဲစက် တစ်ခု အဖြစ် ကျန်ရှိနေမည်။
byအသောက အသောက အသောက
Posted by မိုးယံ at 5:54 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာ့မြေပေါမှာ တစ်ကောင်မှ မထားဘူးဆိုရင်ရော ဘာဖြစ်မလဲ? ကျနော်ပြန်ဖြေမယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး , ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အမျိးသား ကာကွယ်ရေးဖြစ်လို့ဘာကိုမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး ။ နိုင်ငံသားလည်း မပေးနိုင်ဘူး ပေးစရာလည်း မလိုဘူး , ပေးလိုက်ချင်လည်း လူဦးရေတိုးလာရုံအဖတ်တင်မယ် ကိုယ့်လူမျိးကိုမျိသွားမယ် ။ ဟိုနေ့ ကမြင် လိုက်တယ် သူတို့ရွာ တစ်ရွာမှာ မေ่ွး ထားလိုက်တာကလေးတေ่ွ,, ဒါတွေကိုသိရုံဖြင့် အစိုှးရသဘောပေါက်သင့်တယ်. ဘာ့ကြောင့်များ သမတဂျော့ ဘုစ် လိုအမိန့် မျိး အစိုးရက မချပါလိမ့်လို့ ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အားမရဖြစ်မိတယ်။